Ungazivala Kanjani Izinhlelo ku-iPhone 12 Series? - Ungakwenza Kanjani
Uma ubusebenzisa uchungechunge lwe-iPhone 12, ungaqaphela ukuthi ukuvala izinhlelo zokusebenza ezisebenza ngemuva akusebenzi ngendlela efanayo namamodeli wangaphambilini kuze kufike ku-iPhone 10 obekunesici senkinobho yasekhaya. Inkinobho yasekhaya kuma-iPhones ibikade isetshenziswa ukuvala noma ukushintsha phakathi kwezinhlelo zokusebenza kepha manje, inkinobho yasekhaya isusiwe inika i-iPhone ukuthinta okusha. Uma uzibuza ukuthi ungazivala kanjani izinhlelo zokusebenza ku-iPhone 12, i-Apple yethule isenzo esikhundleni senkinobho yasekhaya.
I-Apple yethule uchungechunge lwayo olusha lwe-iPhone 12 muva nje. Uma ungumsebenzisi omusha we-iPhone noma ungazange uyisebenzise kusukela kumodeli ye-iPhone X, ungaba nobunzima bokuvala izinhlelo zakho zokusebenza ezingemuva. Abanye abasebenzisi bashiya izinhlelo zokusebenza ezingemuva njengoba kungenxa yokuthi u-Apple ubeshilo ukuthi izinhlelo zokusebenza ezingemuva ziyaqina lapho uphuma kuhlelo lokusebenza futhi zingasebenzisi ibhethri noma idatha. Kepha yize i-iOS iyisistimu yokusebenza enamandla kakhulu, ayikhululekile kuzo zonke izimbungulu ezingaba khona. Ngakho-ke, kungcono ukuvala zonke izinhlelo zokusebenza ezingemuva ukugwema ukulayisha ngokweqile i-iPhone.
Ake sibheke ukuthi zingavalwa kanjani izinhlelo zokusebenza ku-iPhone 12.
Noma nini lapho uphuma kuhlelo lokusebenza, aluvale uhlelo lokusebenza. Ngakho-ke, zonke izinhlelo zokusebenza ezisetshenziswe ngaphambilini ziyaqhubeka zisebenza ngemuva. Izinhlelo zokusebenza kumele zivalwe ngesandla ukugwema izimbungulu kanye nama-hang. Abantu abaningi ababoni kunesidingo sokuvala izinhlelo zokusebenza ngemuva njengoba kubanda noma kuku-standby uma usuphuma. Kepha izinhlelo zokusebenza ezithile zivuselelwa ngezikhathi ezithile, kudle ibhethri futhi kukhona nobungozi bezimbungulu ezivela kuzinhlelo zokusebenza ezincane i-iOS engaziboni. Izinyathelo zokuvala izinhlelo zokusebenza yilezi:
Swayiphela phezulu kusukela cishe ekugcineni kwesikrini, usibambe umzuzwana bese usidedela lapho ubona amakhadi wezinhlelo zokusebenza ezisebenzayo.
Swayiphela phezulu amakhadi wezinhlelo zokusebenza ongasafuni ukuwasebenzisa.
Manje njengoba i-Apple isuse inkinobho yasekhaya kumafoni abo, sethule isenzo sasekhaya. Isenzo esingenhla sibaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zokusebenza ezingadingekile azisebenzisi ibhethri noma idatha yefoni.
Ufuna ukuthenga ama-Airpods?Hlola I-Apple AirPods Pro vs AirPods 2 Ukuqhathanisa
Ungayisebenzisa kanjani isishintshi sohlelo lokusebenza ku-iPhone 12?
Uma usebenzisa izinhlelo zokusebenza eziningi ngasikhathi sinye, izishintshi zohlelo lokusebenza zingasiza ukuhambela phambili naphakathi kwezinhlelo zokusebenza kalula. Ukuthinta okusetshenziselwa isishintshi sohlelo lokusebenza kuyefana nokuvala izinhlelo zokusebenza.
Swayiphela phezulu kusuka ezansi kwesibonisi sefoni, misa isikhashana, bese uyadedela.
Lapho amakhadi wohlelo lokusebenza ekhonjiswa, swayipha kwesokunxele noma kwesokudla ukushintsha izinhlelo zokusebenza.
Ungasibuka kanjani isikhungo sokulawula ku-iPhone 12?
Ngaphambi kokususwa kwenkinobho yasekhaya ku-iPhone, isenzo sasekhaya esisetshenzisiwe njengamanje sizoncenga Isikhungo Sokulawula. Ngakho-ke Isikhungo Sokulawula sisuswe phansi saya kwesokudla ngaphezulu kwesikrini. Ukubuka Isikhungo Sokulawula, swayiphela phansi usuka ekhoneni eliphezulu kwesokudla, lapho kukhonjiswa khona uphawu lwebhethri.
Kungani izinhlelo zokusebenza zingavaliwe lapho uphuma kuzo?
Noma kunini lapho uphuma khona kuhlelo lokusebenza, likwimodi yokulinda kepha aluvalwanga ngokuphelele. Isizathu sokuthi kungani izinhlelo zokusebenza zingavaliwe ukuthi izinhlelo zokusebenza zizolayisha ngokushesha lapho ugxumela emuva ukuzisebenzisa futhi ngenxa yalokho, zandisa ukusebenza kwefoni yakho. I-Apple incoma kuphela ukuvala izinhlelo zakho zokusebenza uma kumisiwe noma kungasebenzi kahle kepha ukuvala izinhlelo zokusebenza kuzosiza ekusebenzeni kangcono.
Ngingavala zonke izinhlelo zokusebenza ezisebenzayo ku-iPhone 12 ngasikhathi sinye?
Inketho yokuvala zonke izinhlelo zokusebenza ezisebenza ngemuva iyatholakala ku-iPhone 12. Umsebenzisi kufanele avale zonke izinhlelo ngazinye uma kufanele. Lo ngumzamo wenhloso owenziwe yi-Apple ukukhuphula izinga lokusebenza kwe-iPhone.
Ingabe kudingekile ukuvala izinhlelo zokusebenza ngemuva?
I-Apple ikwenze kwacaca ukuthi noma nini lapho umsebenzisi ephuma kuhlelo lokusebenza, izomisa futhi ingasebenzisi ibhethri noma idatha. Ukuvala izinhlelo zokusebenza kwenziwa nzima ngenhloso ukuze i-interface yomsebenzisi ihle. Uma uvala uhlelo lokusebenza uphinde ulivule kabusha, kuthatha isikhathi ukulayisha noma ukuqala kabusha. Ngenkathi lapho uhlelo lokusebenza luvulekile ngemuva, ukusebenza kohlelo lokusebenza kuyanda.
Noma kunjalo, kunezinhlelo zokusebenza ezithile ezineziphazamiso ezilayisha ngokweqile i-iPhone, futhi i-iOS ayikwazi ukuzibona. Endabeni yezinhlelo zokusebenza ezisebenzisa ibhethri eliningi kakhulu, kungcono ukuzivala.
Uchungechunge olusha lwe-iPhone 12 lune Izinhlobo ze-4, i-iPhone 12 Mini, i-iPhone 12, i-iPhone 12 Pro, ne-iPhone 12 Pro Max . Lokhu kuza ngosayizi ohlukile, imibala, isitoreji, imininingwane yekhamera kumamodeli ahlukahlukene. Ibuye inikeze ukuxhumana kwe-5G kuwo wonke amamodeli ezifundeni ezahlukahlukene.
ama-movie wamahhala we-movie ephelele
bukela iwebhusayithi evinjelwe yamavidiyo we-youtube
indlela yokusebenzisa kik kwikhompyutha
ungayithola kanjani i-prime prime ku-amazon
xhuma i-chromecast kusuka kwi-laptop uye ku-tv
ukuthi uyibuke kanjani online